Heterocycles - APICMO CDMO mpamorona
Ny hôtôkôkôlika dia manerana ny natiora, ahitana fampiharana maro isan-karazany, ary amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Ny natiora dia miseho amin'ny endriny maro, ary manan-danja amin'ny lafiny biolojika izy ireo - ny "molecules of life." Ny fampiharana ny heterocycles izay nalaina avy amin'ny simia, biolojia, fanafody, fambolena ary indostria dia legiona.
Ny fikambanana heterocyclic na rafitra boribory dia fifandraisana siklaika izay manana atôma farafahakeliny singa anankiroa amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny perla (s) .Chile chemistry dia sampana misy ny chemema organika mifandraika amin'ny synthesis, ny toetra, ary ny fampiharana ny heterocycles.
Ohatra amin'ny heterocyclic dia ahitana ny asidra nokleary rehetra, ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina, ny ankamaroan'ny biomass (cellulose sy ny fitaovana mifandraika), ary ny plastika voajanahary sy synthetic
maneho 1-12 of 21 vokatra